चकलेट र amaretto मूस - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
चकलेट र amaretto मूस
मिठाई75 मिनेट5 व्यक्ति
द्वारा मायरा फर्नांडीज जोग्लर
यो अर्को विधि हो जुन म "आधारभूत" भन्छु। छन् सरल, छिटो र नतीजा कि पक्कै पनि तपाईं यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्पर्श दिनुहुन्छ।
यसमा केवल5अवयवहरू छन्; क्रीम, चकलेट, चिनी, अण्डा र अमेरेटो, जुन 15 मिनेट भन्दा कममा र हाम्रो थर्मोमिक्सलाई धन्यवाद, एक बन्नुहोस्। नरम र टुक्रो mousse… कससँग १५ मिनेट छैन परिवारलाई चकित पार्नुहोस्?
यदि तपाईंसँग ठूला बच्चाहरू छन् भने, यो आफैं गर्ने मौका लिनुहोस् र वास्तविक शेफ भएको बहाना।
रक्सी वैकल्पिक हो, यसलाई हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणका लागि व्हिस्की, किर्श वा केन्ट्रिउ ... त्यहाँ प्रत्येक एक अर्को आफ्नै स्वादको साथ। म एक तिर झुकाव छ अमरेटो किनभने यसमा हल्का बदामको स्वाद छ जुन चकलेटको साथ पूर्ण रूपमा जान्छ।
मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई आफ्नो राय भन्नु भयो!
1 चकलेट र amaretto मूस
१ ch मिनेटमा एक चकलेट मिठाई।
मायरा फर्नांडीज जोग्लर
तयारी समय: १२ एच M एम
खाना पकाउने समय: 8M
कुल समय: १२ एच M एम
G 100 ग्राम डार्क चकलेट
२ ठूला अण्डा गोरा
G 75 ग्राम ब्राउन कास्टर चिनी
G० g कोर्रा क्रीम
G० g amaretto
सफा र सुक्खा गिलासको साथ, हामी पुतली राख्छौं र सेतो खन्याउछौं। हामी तिनीहरूलाई हिउँको बिन्दुमा सवारी गर्छौं २ मिनेट गति ½ ½।
जब त्यहाँ समय समाप्त गर्न 30 सेकेन्ड बाँकी छ, हामी एक क्यास्केड को रूप मा मुख मार्फत चीनी थप्छौं।
समयको अन्त्यमा, हामी मिश्रण र रिजर्व हटाउँछौं।
गिलास धोएर र बटरफ्लाइ अन साथ, क्रीम थप्नुहोस् र यसलाई हराउनुहोस् गति ½ ½। यसलाई काट्न नदिने होसियार हुनुपर्छ।
जब यो भेला हुन्छ, हामी मेसिन रोक्छौं र यसलाई हटाउँछौं।
गिलास नधोई, समयमा चकलेट पगाल्नुहोस् Minutes मिनेट º०º मा वेग २ मा.
जब यो पग्लन थाल्छ, हामी मेसिनलाई रोक्छौं, गिलास खोल्छौं, चकलेट चिप्सलाई ब्लेडहरूमा तल राख्छौं र अमेरेटो थप्छौं र समयको अन्त्यसम्म पग्लिन जारी राख्छौं।
हामी मिश्रणलाई ठूलो कटोरामा हटाउँछौं।
हामी व्हीप्ड क्रीम बनाउँदै खामको चालहरू समावेश गर्दछौं।
अर्को, हामी सावधानीपूर्वक हिउँको बिन्दुमा माउन्ट गरिएको सेतोहरू समावेश गर्दछौं ताकि मिश्रण कम हुँदैन।
हामी मूसलाई5सुन्दर कप वा सानो कटोरामा विभाजन गर्छौं।
फ्रिजमा १ घण्टाको लागि चिसो हुन दिनुहोस्।
सेवा गर्दा, राम्रो चकलेट वा कुरकुरा चकलेट बल संग सजाउनुहोस्।
आइसिङ चिनी बनाउनको लागि, तपाईंले यसलाई 1 स्पीडमा 10 मिनेटको लागि पीस्नु पर्छ।
गिलास खोल्नु अघि लगभग5मिनेट पास गर्न अनुमति दिनुहोस् धुलो चिनीले भान्सा भर्नबाट बच्नुहोस्।
बाँकी रहेको चिनीलाई अन्य डेसर्टहरूमा प्रयोग गर्न गिलासको भाँडोमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
फिनिश धेरै राम्रो छ र चिनी अनाज ध्यान दिन योग्य हुनेछैन।
थप जानकारी - हल्का स्ट्रबेरी फोम
यस रेसिपीलाई तपाइँको Thermomix® मोडेलमा अनुकूलन गर्नुहोस्
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, १/२ घण्टा भन्दा कम, Postres
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » चकलेट र amaretto मूस
मैले कहिले पनि मुसको साथ हिम्मत गरिनँ, तर तपाईंको दृश्य कस्तो देखिन्छ, र तपाईंले यसलाई कत्ति सुन्दर सजावटमा राख्नु भएको छ, मँ त्यहाँ पुग्नुपर्नेछ! खैर, तपाईंले ती चकलेटले सजाएको संख्या कहाँ खरीद गर्नुभयो ???
म तपाईंलाई यो नुस्खा तयार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ किनकि यो तपाईंले देख्नु भएको साधारण चीजहरू मध्ये एक हो!
मैले चकलेट ट्रान्सफर शीटको साथ चकलेट सजावट गरें। तिनीहरू स्थानान्तरणका रूपमा पनि चिनिन्छन् र बच्चाहरूको स्टिकरहरू झैं छन्। तिनीहरू केवल तातो चकलेटको माथि राखिन्छन्, चिसो गर्न अनुमति दिइन्छ, र हटाइन्छ। यो पहिलो पटक हो कि मैले यो गर्छु र, सत्य, यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ... तर यो यति प्यारा छ !!
मलाई लाग्छ कि यो एक उत्कृष्ट नुस्खा हो, शंका गर्नुहोस् कि म यसलाई प्रयास गर्छु। के म जान्न चाहन्छु जहाँ म चकलेट आंकडा पाउन सक्छु जुन तपाईले मउसे सुशोभित गर्नुभएको छ, वा यदि तपाइँले उनीहरूलाई बनाउनुभएको छ यदि तपाइँ कसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भने। धन्यबाद।
अन्नालाई जवाफ दिनुहोस्
आह! मैले तपाईंलाई सोध्न बिर्सें कि क्यास्टर चिनी आईसिंग चिनी जस्तो छ तर ब्राउन चिनीको साथ।
कास्टर चिनी जमिन चिनी हो जुन हामी थर्मोमिक्ससँग गर्छौं। यो सेतो चिनीको वा खैरो चिनीको कास्टर हुन सक्छ।
कास्टर र ग्लास एकै रूपमा देखिन्छन् किनकि तिनीहरू दुबै पातलो छन् तर सधैं एक अर्काको लागि प्रतिस्थापन हुन सक्दैन।
सजावटको बारेमा, मैले जेसीलाई यसको बारेमा भने। तिनीहरू चकलेटका लागि स्थानान्तरण हुन्।
यो महान हुनु पर्छ
तिनीहरू आदी छन् ... र यति सजिलो !!
चिनीको प्रकारको बारेमा अन्नाको प्रश्न बाहेक, मसँग अर्को प्रश्न छ। के तपाईले हिप्ड क्रीम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूले जारमा बेच्छन्?
तपाईको मतलब त्यो क्यान जुन तपाईलाई स्प्रे जस्तो हल्लाउनु पर्छ? म यसलाई प्रयोग गर्दिन किनकि त्यस्तो किसिमको क्रीम तत्कालै आउँदछ।
म तपाइँलाई यो सबै भन्दा किफायती तरीकाले गर्न प्रोत्साहित गर्दछु, जुन हिपिंग क्रीमको प्याकेज खरीद गरेर हो, यसलाई फ्रिजमा धेरै चिसो नभएसम्म छोड्दै र थर्मोमिक्ससँग कोर्रा लगाएर ... १ मिनेट भन्दा कममा तपाइँले यसलाई चढाउनु भएको छ। र राम्रोसँग माउन्ट गरियो !!
मारिया येशू भन्यो
सबैभन्दा पहिले, तपाइँको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, तर म तपाइँलाई एक प्रश्न सोध्न चाहान्छु, अमरेटो के हो?
मारिया येशुलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया येशु:
अमारेटो लगभग २ºº को इटालियन लिकुर हो, यसमा भनिला, बदाम र खुबानीको स्वाद हुन्छ। हामी सबै सुपरमार्केटमा फेला पार्न सक्छौं, विशेष गरी डिसारोनो ब्रान्ड, यद्यपि त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू छन्।
अमरेटोको सट्टामा के म अरू रक्सी प्रयोग गर्न सक्छु?
पेपीलाई जवाफ दिनुहोस्
पक्कै पनि तपाईं amaretto अर्को रक्सीको साथ बदल्न सक्नुहुन्छ। व्हिस्की, गाढा रम वा एउटा पोर्ट प्रयास गर्नुहोस् ... तर त्यसो भए अब यो चकलेट र amaretto mousse हुनेछैन !! ; पी
लुसिया गार्सिया एकल भन्यो
म जान्न चाहन्छु कि अमारेटो के हो र यदि तपाईं अर्को मदिराको लागि विधि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।
लुसिया गार्सिया सोलिसलाई जवाफ दिनुहोस्
म तिमीलाई Pepi जस्तै बताउँछु। तपाईं amaretto हटाउन वा व्हिस्की, कालो रम, पोर्ट संग प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ...
तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद, ती अद्भुत छन्!
ट्रान्सफरहरू कहाँ सorate्कलन गर्न खरीद गरियो? मलाई लाग्छ केक सजावटको साथ धेरै जीत!
बेलेनलाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु, सजावटले भाँडालाई अझ रमाइलो बनाउँदछ।
स्थानान्तरण विशेष चकलेट, पेस्ट्री वा गउरमेन्ट स्टोरहरूमा खरीद गरिन्छ।
मलाई यी चकलेट कप मन पर्छ! म choco लगाउने सबै बारे मा भावुक छु! चुम्बनहरू
पिलुकालाई जवाफ दिनुहोस्
म पनि चकलेटको फ्यान हुँ र म तपाईलाई भन्न सक्छु कि मूस बेकार भएको छ। यो भरिपूर्ण छैन र यसको स्वाद छ… .अम्म्म !!
सैन्ड्रा इग्लेसियास भन्यो
सजावट बलहरू जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई खरीद गर्नुहुन्छ केही हुन्छ यदि मैले कुनै मद्य राख्दैन भने धन्यवाद बधाई छ ……………………।
सैन्ड्रा इग्लेसियालाई जवाफ दिनुहोस्
बलहरू मूल्यवान छ, तर तपाईंसँग घरमा भएको कुनै पनि सानो कुरा सजावटको लागि लायक छ, सेतो चकलेटको केही कर्ल पनि राम्रो देखिनेछ!
यदि तपाईं रक्सी थप्नुहुन्न भने, तपाईंसँग एक शानदार चकलेट मूस हुनेछ!
एउटा प्रश्न माेरा डार्क चकलेटको सट्टा दूध चकलेटको साथ बनाउन सकिन्छ, मलाई डार्क चकलेट मनपर्दैन, हामी भन्छौ, 😉
भेरोनिकामा जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि, यो दूध चकलेटको लागि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। उही रकम राख्नुहोस् जस्तो कि यो कालो र भोला थियो!
मलाई कालो राम्रो मन पर्छ तर म यो पनि गर्दछ किनकि मैले प्रयोग गर्ने पागलबिना पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ र जुन मेरो घरमा मुख्य कुरा हो!
नमस्ते, म तपाईलाई चकलेट सोध्न चाहान्छु कि त्यो हराउने हो वा चकलेट बिना दुध बिना चिनो खान नपाई, धन्यबाद ………………
यो तातो चकलेट वा त्यस्तै केहि होइन। नेकली ब्रान्डको ब्राउन पेपर छ (मानौं यो प्याकेजहरू बेर्ने हो भने) र नेस्ले डेसर्ट्स भन्छ, केकहरू ढाक्न यो चकलेट मनपराउँदछ। त्यहाँ कालो र दूध छ। प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफले केहि ड्रपहरू वा आँसुहरू प्रयोग गर्छन्, जुन तपाईले निश्चित रूपमा ब्लगमा देख्नु भएको छ।
हेलो गिलियस म तपाईंको रिसिप्टहरू प्रेम गर्दछु, विशेष गरी क्यू पदार्थहरूको लागि हो, हरेक चीज सित्तैमा केही कागजातहरू बनाउँछु, र तपाईं मलाई परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ म सधैं त्यसो गर्छु। तपाईं हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
ISABEL लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई थाहा छैन हामी प्रत्येक पटक यस्तै प्रकारको टिप्पणी गरेकोमा हामी कत्ति खुसी छौं! हामी कामको अंश गर्छौं तर यो तपाई र तपाईंको टिप्पणी बिना सम्भव थिएन! ... त्यसो भए, धेरै धेरै धन्यवाद !!
मलाई थाहा छैन अमारेटोको अर्थ के हो, मलाई कसैलाई बताउन आवश्यक छ ताकि म यो प्रयोग गर्ने विधि बनाउन सक्दछु
ईवालाई जवाफ दिनुहोस्
जे होस् मैले पहिले नै अमारातोको बारेमा कुरा गरिसकेको छु, दुबै विधिमा र टिप्पणीमा, म तपाईंलाई अधिक पूर्ण जानकारीको साथ लिंक दिन्छु।
पूर्ण असफलता !!!!
तालियालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले त पत्याउनै सकिन!!
मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ। के तपाईसँग एक चकलेट मूस छ जसलाई ह्वाइप क्रीम चाहिदैन? म बिन्दु पाउँदिन र, कि त्यसले मलाई काट्छ, वा मँ छोटो रहन्छु र यसको शरीर हुँदैन। धन्यवाद
म विश्वास गर्न सक्दिन कि तपाईंले मलाई ह्वाप्ड क्रीमको बारेमा बताउनुभएको छ ... यो कति उत्कृष्ट छ!
सत्य यो हो कि मलाई क्रीम बिना कुनै छैन तर म तपाईको सुझावलाई चुनौतीको रूपमा लिन्छु र आशा गर्छु कि तपाईले चाँडै मनपराउनु भएको कुरा प्रकाशित गर्नु हुन्छ, ठीक छ?
तपाईको रुचि को लागी धेरै धन्यबाद; तपाइँ मलाई अझै पनि मलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ क्रीम कसरी कोर्राउने भनेर। चुम्बनहरू
म तपाइँको नुस्खा बिर्सन छैन। तर मैले तपाइँको अन्तिम टिप्पणी देखेको छु र यसले मलाई धेरै आश्चर्य चकित पार्‍यो किनभने कोरिंग क्रीम सबैभन्दा सजिलो छ!
दिमागमा राख्नु पर्ने कुराहरु:
१. क्रीम जहिले पनि धेरै चिसो हुन्छ तर स्थिर हुँदैन।
२. थ्रटल राख्नुहोस् र गति 2/ १/२ सेट गर्नुहोस्।
It. यसमा नजर राख्नुहोस् ताकि यसले काट्ने छैन।
You. यदि तपाइँ थर्मोमिक्स गिलास केही समयको लागि फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने यसले सुपर छिटो माउन्ट गर्दछ।
सबै क्रीमहरू समान हुँदैनन्, तिनीहरूसँग कम्तिमा% 35% फ्याट (मिग्रॅ) हुनुपर्दछ। तिनीहरूले पकाउन क्रीम लायक छैन।
तरकारी क्रीमलाई व्हिप गर्न तपाईंले उही चरणहरूको पालना गर्नुपर्दछ।
तपाईले मलाई भन्नु हुन्छ कि यी टिप्सले तपाईको सेवा गरीरहेको छ भने!
म तपाईको ब्लग मा धेरै अंकुश छु। मैले उसलाई भेटे पछि तपाईका व्यंजनहरुका साथ प्रयोग गर्न छोडिन। हिजो मेरा भान्जालाई चकलेट मूस खोज्दै, मैले यसलाई एउटा भव्य फेला पारे। मैले यसलाई चकलेट प्यारोसँग बनाएको छु र तिनीहरूलाई चकलेट मन परेकोले उनीहरू लामो समयसम्म पर्खिन चाहँदैनन्, यसकारण मैले यसलाई फ्रिजरमा राखें र हाम्रो स्वादिष्ट आश्चर्य के थियो… यो स्वादिष्ट चकलेट आइसक्रीममा परिणत भयो !!!! Deliceooo !!! म सिफारिस गर्दछु, यसको स्वाद चाकलेट आइसक्रीम जस्तो छ।
मलाई मन पर्छ कि तपाईले प्रयोग गर्नुभयो!
र यो पनि कि तपाईंले आफ्नो खोजहरूमा टिप्पणी गर्नुभयो।
चकलेट संग Cantucci